Uncategorized Archives - ShwengweGames
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုများဖြစ်ပွားပြီး ၅ ဦးသေဆုံ
August 3, 2020 by Shwengwe Games
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုများဖြစ်ပွားပြီး ၅ ဦးသေဆုံး
နေပြည်တော် ၃ ဩဂုတ်
ယနေ့နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်က ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၇၆/၅)နှင့် (၁၇၆/၆)ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သာဂရအမြန်လမ်းမီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သာဂရအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသား (၂)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂)ဦး၊ ကလေး (၂)ဦး စုစုပေါင်း (၆)ဦးအနက် အမျိုးသား (၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁)ဦး (သေဆုံး)အား ဆွာမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ နံနက် ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၂၅/၂)နှင့် (၁၂၅/၃)ကြားတွင် မော်တော်ယာဉ်(၁)စီး ရှေ့ယာဘီးပေါက်၍ လမ်းလယ်ကျွန်းအား ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် ဗောဓိကုန်းအမြန်လမ်းမီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဗောဓိကုန်းအမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် သွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသား (၁)ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိကြောင်း။
နံနက် ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၃၃/၆)အနီးတွင် မော်တော်ယာဉ် (၁)စီးသည် လမ်းချော်၍ လမ်းလယ်ကျွန်းအား ကျော်တက်ကာ ဘယ်ရီယာတုံးများအား ဝင်တိုက်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် စကားအင်း အမြန်လမ်းနယ်မြေ မီးသတ်စခန်းနှင့် ပြင်စည်အမြန်လမ်းနယ်မြေ မီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊
စကားအင်းအမြန်လမ်းရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသား (၂)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄)ဦးအနက် အမျိုးသား (၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂) ဦး (သေဆုံး)နှင့် အမျိုးသား (၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂)ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတို့အား တံတားဦးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ၅ ဦးေသဆုံး
ေနျပည္ေတာ္ ၃ ဩဂုတ္
ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔က ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇၆/၅)ႏွင့္ (၁၇၆/၆)ၾကားတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သာဂရအျမန္လမ္းမီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သာဂရအျမန္လမ္းမႀကီးရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သြားေရာက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ အမ်ိဳးသား (၂)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦး၊ ကေလး (၂)ဦး စုစုေပါင္း (၆)ဦးအနက္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး (ေသဆုံး)အား ဆြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၂၅/၂)ႏွင့္ (၁၂၅/၃)ၾကားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁)စီး ေ႐ွ႕ယာဘီးေပါက္၍ လမ္းလယ္ကြၽန္းအား ဝင္တိုက္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသျဖင့္ ေဗာဓိကုန္းအျမန္လမ္းမီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဗာဓိကုန္းအျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈ မ႐ွိေၾကာင္း။
နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၃၃/၆)အနီးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁)စီးသည္ လမ္းေခ်ာ္၍ လမ္းလယ္ကြၽန္းအား ေက်ာ္တက္ကာ ဘယ္ရီယာတုံးမ်ားအား ဝင္တိုက္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ စကားအင္း အျမန္လမ္းနယ္ေျမ မီးသတ္စခန္းႏွင့္ ျပင္စည္အျမန္လမ္းနယ္ေျမ မီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊
စကားအင္းအျမန္လမ္းရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ အမ်ိဳးသား (၂)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၄)ဦးအနက္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦး (ေသဆုံး)ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိတို႔အား တံတားဦးေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ထိုင်းထီပထမဆု ဘတ်ခြောက်သန်းဆု နှစ်ဆု (ကျပ်သိန်း ၅,၀၀၀ ကျော်) ကို မြန်မာလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံ က ဆွတ်ခူး
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင် ဒေသတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ သော မြန်မာလုပ်သား ဇနီးမောင် နှံသည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က ဖွင့် လှစ်သည့် ထိုင်းထီပထမဆု ဘတ်ခြောက်သန်းဆု နှစ်ဆု (ကျပ်သိန်း ၅,၀၀၀ ကျော်) ဆွတ် ခူးခဲ့သည်။
ထိုင်းထီဆု နှစ်ဆုကံထူး သည့် မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံ သည် ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများအရေးကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသော AAC (မဟာမိတ်)အဖွဲ့ထံ ကူညီလုပ်အားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူများ ဖြစ် ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့မှ ကိုရဲမင်းက ပြောသည်။
‘‘ ထိုင်းမှာ မြန်မာလုပ်သား တွေ မကြာခဏထီကံထူးပေမယ့် အခုလို ပထမဆုနှစ်ဆု ကံထူးတာ တော့ ရှားတယ်။ သူတို့ လင်မ ယားက မြန်မာပြည်မပြန်ချင်သေး ဘူး။ ထိုင်းမှာပဲ ဆက်ပြီးနေချင် သေးတယ် ပြောပါတယ်’’ ဟု ကိုရဲမင်းက ပြောသည်။
မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံ သည် ထိုင်းထီပေါက်စဉ်နံပါတ် ၈၇၃၂၈၆ ဖြင့် ထီပေါက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ဇာတိဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမြောက် ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ထီဆိုင်တစ်ဆိုင် တည်းမှ ဝယ်ယူကံစမ်းသော မြန် မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား မိသားစု နှစ်စုသည် ဘတ်ခြောက်သန်းစီ အသီးသီး ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ် သားများအနေဖြင့် ထိုင်းထီဆု ပေါက်ငွေများကို လုံခြုံစိတ်ချ သောနေရာတွင် ထားရှိသင့် ကြောင်း ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ် သားများအရေး ကူညီပေးနေ သော AAC အဖွဲ့က အကြံပြု သည်။
ထိုင္းထီပထမဆု ဘတ္ေျခာက္သန္းဆု ႏွစ္ဆု (က်ပ္သိန္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္) ကို ျမန္မာလုပ္သား ဇနီးေမာင္ႏွံ က ဆြတ္ခူး
ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ ေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ျမန္မာလုပ္သား ဇနီးေမာင္ ႏွံသည္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ဖြင့္ လွစ္သည့္ ထိုင္းထီပထမဆု ဘတ္ေျခာက္သန္းဆု ႏွစ္ဆု (က်ပ္သိန္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္) ဆြတ္ ခူးခဲ့သည္။
ထိုင္းထီဆု ႏွစ္ဆုကံထူး သည့္ ျမန္မာလုပ္သားဇနီးေမာင္ႏွံ သည္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေရးကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးေနေသာ AAC (မဟာမိတ္)အဖြဲ႕ထံ ကူညီလုပ္အားေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။
‘‘ ထိုင္းမွာ ျမန္မာလုပ္သား ေတြ မၾကာခဏထီကံထူးေပမယ့္ အခုလို ပထမဆုႏွစ္ဆု ကံထူးတာ ေတာ့ ႐ွားတယ္။ သူတို႔ လင္မ ယားက ျမန္မာျပည္မျပန္ခ်င္ေသး ဘူး။ ထိုင္းမွာပဲ ဆက္ၿပီးေနခ်င္ ေသးတယ္ ေျပာပါတယ္’’ ဟု ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။
ျမန္မာလုပ္သားဇနီးေမာင္ႏွံ သည္ ထိုင္းထီေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၈၇၃၂၈၆ ျဖင့္ ထီေပါက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သည္။
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕႐ွိ ထီဆိုင္တစ္ဆိုင္ တည္းမွ ဝယ္ယူကံစမ္းေသာ ျမန္ မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မိသားစု ႏွစ္စုသည္ ဘတ္ေျခာက္သန္းစီ အသီးသီး ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။
ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းထီဆု ေပါက္ေငြမ်ားကို လုံျခဳံစိတ္ခ် ေသာေနရာတြင္ ထား႐ွိသင့္ ေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားအေရး ကူညီေပးေန ေသာ AAC အဖြဲ႕က အၾကံျပဳ သည္။
၂၀၂၀ (၆)လပို င်းမှစ၍ သင် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်း ကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ (မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံး)
June 2, 2020 by Shwengwe Games
သင်် နာမည်၊ဂုဏ်သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်း​တွေပေါ်နေပြီလား?သင့်မိတ်ဆွေကော?
ဤလမ်းကြောင်း အားအောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဟုခေါ်ပြီးလက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံအပေါ်သို့ ထိုးတက်သွားသော လမ်းကြောင်း လည်းဖြစ်သည်။ ကံလမ်းကြောင်းလည်းကောင်းမွန်နေမည် ဆိုပါက သင့်အားဂုဏ်​ သတင်းကျော်ကြားခြင်း၊အောင်မြင်ကျော်ဇောခြင်းတို့ကို အာမခံချက်ပေး မည်​ဖြစ်ပေ သည်။
ထိုလမ်းကြောင်း အားမှန်ကန်စွာ ဖတ်နိုင်ပါ ကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုရှိ/မရှိ|ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းရှိ/မရှိ|ချီးမြှင့်မြှောက်စားခံရခြင်း ရှိ/မရှိ|သြဇာတိက္ကမရှိ/မရှိ|ဓနဥစ္စာကြွယ်၀ခြင်းရှိ/မရှိ|ဆွဲဆောင် နိုင်မှုရှိ/မရှိ|ပညာ-အတတ် ပညာဖြင့် အသက်မွေးရခြင်း ရှိ/မရှိ|စာပေ အနုပညာဖြင့် ကျော်ကြားမှုရှိ/မရှိ| နာမည်|ဆိုင်းဘုတ်|ပရိသတ်နှင် ​့လုပ်ကိုင် စားသောက် နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ|အထွဋ် အထိပ်ရောက်/မရောက်စသည် ဖြင့်သိနိုင် ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားသော ပုံကား လက်ကောက် ရစ်​ပေါ်မှ ထွက်ပေါ်လာသောအောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး လက္ခဏာရှင်အား မိမိနေထိုင်ရာ အရပ်၌ပင်​ အများ၏ကြည်ညိုလေးစား ခံရစေခြင်း|သြဇာအာဏာရှိစေခြင်း| ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစေခြင်း|ကြွယ်ဝချမ်းသာစေခြင်း|ပါရမီရှင် ဖြစ်စေခြင်း|ကျော်ဇောထင်ရှားစေခြင်း|ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး နာမည်ကောင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့အားပေးစွမ်း မည်​ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၂၀ (၆)လပုိ င္းမွစ၍ သင္ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္း ကို ဒါေလးဖတ္ၿပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ (မိတ္ေဆြေတြကိုလည္း မ်ွေ၀ေပးလုိက္ပါအံုး)
သင့္္ နာမည္၊ဂုဏ္သတင္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ၊ႀကီးပြား ဖို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္း​ေတြေပၚေနၿပီလား?သင့္မိတ္ေဆြေကာ?
ဤလမ္းေၾကာင္း အားေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းဟုေခၚၿပီး လက္သူႂကြယ္၏ေျခရင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခံုအေပၚသို႔ ထိုးတက္သြားေသာ လမ္းေၾကာင္း လည္းျဖစ္သည္။ ကံလမ္းေၾကာင္းလည္းေကာင္းမြန္ေနမည္ ဆုိပါက သင္႔အားဂုဏ္​ သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာျခင္းတို႔ကို အာမခံခ်က္ေပး မည္​ျဖစ္ေပ သည္။
ထိုလမ္းေၾကာင္း အားမွန္ကန္စြာ ဖတ္ႏိုင္ပါ ကေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိ/မရွိ|ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းရွိ/မရွိ|ခ်ီးျမႇင္႔ေျမႇာက္စားခံရျခင္း ရွိ/မရွိ|ၾသဇာတိကၠမရွိ/မရွိ|ဓနဥစၥာႂကြယ္၀ျခင္းရွိ/မရွိ|ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မႈရွိ/မရွိ|ပညာ-အတတ္ ပညာျဖင္႔ အသက္္ေမြးရျခင္း ရွိ/မရွိ|စာေပ အႏုပညာျဖင္႔႔ ေက်ာ္ၾကားမႈရွိ/မရွိ| နာမည္|ဆိုင္းဘုတ္|ပရိသတ္ႏွင္ ​့လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ|အထြဋ္ အထိပ္ေရာက္/မေရာက္စသည္ ျဖင္႔သိႏိုင္ ပါတယ္။
ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ပံုကား လက္ေကာက္ ရစ္​ေပၚမွ ထြက္ေပၚလ ာေသာေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး လကၡဏာရွင္အား မိမိေနထိုင္ရာ အရပ္၌ပင္​ အမ်ား၏ၾကည္ညိဳေလးစား ခံရေစျခင္း|ၾသဇာအာဏာရွိေစျခင္း| ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေစျခင္း|ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေစျခင္း|ပါရမီရွင္ ျဖစ္ေစျခင္း|ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားေစျခင္း|ဘြဲ႔႔ထူးဂုဏ္ထူး နာမည္ေကာင္းတို႔ႏွင္႔ျပည္​့စံုျခင္းတို ႔အားေပးစြမ္း မည္​ျဖစ္ပါသည္။
အနုပညာလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်စဉ်က အခက်အခဲတွေနဲ့ လက်ဦးဆရာတွေအကြောင်းကို အလွမ်းပြေ ပြောပြလာတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းက တေးသီချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုနေပြီးသရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုကိုတခဲနက်ရရှိထားတဲ့သူပါနော်.။စိုင်းစိုင်းက လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တိုင်းကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာတင်ပေးလေ့ရှိနေပြီးယခုမှာလည်း သူရဲ့အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကအမှတ်တရအဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ပြန်လည်ပြောပြပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
” ကျနော် ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့ ယောင်ခြောက်ဆယ်နဲ့ ယက်ယက်ကန်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ(စာရေးဆရာ)ဆရာနီကိုရဲနဲ့ စပြီးခင်ပါတယ် ကျနော်က ဘုရင့်နောင်မှာနေတယ် သူက သင်္ကန်းကျွန်းမှာ နှစ်ယောက်သားသုဝဏ္ဏက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားသွားထိုင်တယ်ကျနော်မတောက်တခေါက်ရေးထားတဲ့စာတွေလည်း အတင်းဖတ်ခိုင်းတာပေါ့ကိုရဲကဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာလည်းဖြစ်တော့ သူနဲ့အတူတူ ရှုတင်တွေလည်း လျှောက်လိုက်ပေါ့ဗျာ
တစ်ရက်တော့ ကိုရဲက ဗီဒီယိုရိုက်ရအောင်ကွာငါ့မှာပိုက်ဆံဒီလောက်ရှိတယ်မင်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့ ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကိုမြှောက်ပေးပြီး ပိုက်ဆံစုကြတယ် RC2 က queen မမ တစ်ယာက်ကိုလည်းသူ့အိမ်မှာ သွားစည်းရုံးတယ် ပထမဆုံး camera ရှေ့မှာစရိုက်ဖူးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ အဲဒီနေ့ကအခုလိုမိုးတွင်းတစ်ရက်ပဲဆိုတာ မှတ်မိတယ်အဲ့ဇာတ်ကားလည်း ပြီးအောင် မရိုက်လိုက်ရပါဘူး ထွက်လာဖို့ဆိုတာဝေးရော
ပထမဆုံး ရှုတင်စတည်တဲ့နေ့ကကိုရဲဒါရိုက်တာလုပ်တာဟေ့ဆိုပြီး ဆရာကျောင်း (ဒီဇိုင်းမျိုးဆွေသန်း ) က လာရှိုးတာခင်ဗျ အဲ့နေ့မှာ ဆရာကျောင်းနဲ့ ရင်းနှီးသွားတယ်ဆိုပါတော့ နောက်ရက်ကျတော့ဆရာကျောင်းကျနော့်ကိုဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ စီးရီးကြော်ငြာရိုက်စရာရှိလို့သန်လျင်မှာသွားရိုက်ကြရအောင်တဲ့ .. အိုကေ ချမယ်ဗျာ..ကျိုက်ခေါက်ဘုရားနားမှာရိုက်တာ မြန်မာသံသီချင်း ပုဆိုးနဲ့ ဘာနဲ့ ..
ကြော်ငြာရိုက်တဲ့နေ့လည်မှာ ဓာတ်ပုံဦးပီတာက ဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့ပေါက်ချလာတယ် ဘာတွေလုပ်နေကြပြန်ပြီလဲဆိုပြီးလာရှိုးတာပါပဲအဲဒီနေ့မှာပဲဦးပီတာနဲ့ ရင်းနှီးသွားပြန်ပါတယ် နောက်တစ်ပတ်လောက်ကျတော့ ဦးပီတာဖုန်းဆက်လာပြီးငါလည်း စီးရီးကြော်ငြာရိုက်မလို့တဲ့ကန်တော်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံတဲ့ကျနော်လည်း အဲ့ဒီတော့မှကန်တော်ကြီးဆိုတာရောက်ဖူးတာပဲ အိုက်တင်ဘယ်လိုသင်လဲဆိုတော့ မင်းလုပ်တတ်သလို လုပ်ကွာတဲ့
အဲလိုနဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုရိုက်ဖြစ်ကြတယ် နောက်တစ်ပတ်ကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခွေတဲ့အဲဒီအခါကျတော့မှ Smile နဲ့ ကျနော်နဲ့ကိုတနိုင်ငံလုံးသတိထားမိခဲ့ကြတာပါ ကို Alex ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ကျနော်လည်းအတွဲခွေကြော်ငြာမှန်သမျှရိုက်ရတော့တာပဲအဲဒီကနေ VCD ဆိုတာကြီးပေါ်လာတော့ VCD မင်းသားအလုပ်ရသွားတာပေါ့တစ်ပုဒ် ၄၀၀၀ တစ်ရက် ၂ ပုဒ်ရိုက်ရင် ၈၀၀၀ ယူပြီးပြန် လွမ်းတတ်ရင်တော့ လွမ်းချင်စရာ
ကျနော့်ဘဝဖြစ်စဉ်မှာ ကိုနီကိုရဲ ဒီဇိုင်းဆရာကျောင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံဦးပီတာတို့ကိုဒီစာနဲ့ ဂါရဝပြုပါတယ်အံ့ဩစရာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ကျနော် အမှတ်တရဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှကိုမရှိတာပဲဒါနဲ့ ငယ်ငယ်က ကျနော်တို့သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ပုံပဲ ဒီစာမှာအမှတ်တရထည့်သွင်းပါတယ် ဒီပုံတောင် Smile ပေးထားလို့ ကျနော့်မှာရှိနေတာ ” ဆိုပြီးအမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အောက်ခြေမလွတ်ပဲအခုချိန်ထိလက်ဦးဆရာတွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အနုပညာဘဝအစကို အမှတ်ရနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းကတော့ တကယ့်ကို ချီးကျူးစရာပါပဲနော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ေနတဲ့ စိုင္းစိုင္းက ေတးသီခ်င္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ေရးသားသီဆိုေနၿပီးသ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာလည္းပီျပင္ပိုင္ႏိုင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ပရိသတ္အားေပးမႈကိုတခဲနက္ရရွိထားတဲ့သူပါေနာ္.။စိုင္းစိုင္းကလႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္တိုင္းကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာတင္ေပးေလ့ရွိေနၿပီး ယခုမွာလည္းသူရဲ႕အႏုပညာေလာကထဲကိုစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့စဥ္က အမွတ္တရ အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္…။
” က်ေနာ္ ရန္ကုန္ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္နဲ႔ယက္ယက္ကန္ကန္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ(စာေရးဆရာ)ဆရာနီကိုရဲနဲ႔စၿပီးခင္ပါတယ္ က်ေနာ္က ဘုရင့္ေနာင္မွာေနတယ္သူကသကၤန္းကြၽန္းမွာ ႏွစ္ေယာက္သား သုဝဏၰကလက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာသြားသြားထိုင္တယ္ က်ေနာ္မေတာက္တေခါက္ေရးထားတဲ့စာေတြလည္း အတင္းဖတ္ခိုင္းတာေပါ့ကိုရဲက ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာလည္းျဖစ္ေတာ့ သူနဲ႔အတူတူ ရႈတင္ေတြလည္း ေလွ်ာက္လိုက္ေပါ့ဗ်ာ
တစ္ရက္ေတာ့ ကိုရဲကဗီဒီယို႐ိုက္ရေအာင္ကြာ ငါ့မွာပိုက္ဆံဒီေလာက္ရွိတယ္ မင္းမွာဘယ္ေလာက္ရွိလဲတဲ့ က်ေနာ္လည္းသူငယ္ခ်င္း ၃ ေယာက္ကို ေျမႇာက္ေပးၿပီး ပိုက္ဆံစုၾကတယ္ RC2 က queen မမတစ္ယာက္ကိုလည္း သူ႔အိမ္မွာ သြားစည္း႐ုံးတယ္ ပထမဆုံးcamera ေရွ႕မွာ စ႐ိုက္ဖူးခဲ့တဲ့ဟာေပါ့အဲဒီေန႔က အခုလိုမိုးတြင္းတစ္ရက္ပဲဆိုတာ မွတ္မိတယ္အဲ့ဇာတ္ကားလည္း ၿပီးေအာင္ မ႐ိုက္လိုက္ရပါဘူး ထြက္လာဖို႔ဆိုတာေဝးေရာ
ပထမဆုံးရႈတင္စတည္တဲ့ေန႔က ကိုရဲဒါ႐ိုက္တာလုပ္တာေဟ့ဆိုၿပီးဆရာေက်ာင္း(ဒီဇိုင္းမ်ိဳးေဆြသန္း ) ကလာရႈိးတာခင္ဗ် အဲ့ေန႔မွာ ဆရာေက်ာင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးသြားတယ္ဆိုပါေတာ့ ေနာက္ရက္က်ေတာ့ဆရာေက်ာင္းက်ေနာ့္ကိုဖုန္းဆက္လာၿပီးေတာ့ စီးရီးေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္စရာရွိလို႔ သန္လ်င္မွာသြား႐ိုက္ၾကရေအာင္တဲ့ ..အိုေက ခ်မယ္ဗ်ာ.. က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားနားမွာ႐ိုက္တာ ျမန္မာသံသီခ်င္း ပုဆိုးနဲ႔ ဘာနဲ႔ ..
ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္တဲ့ေန႔လည္မွာ ဓာတ္ပုံဦးပီတာက ဆိုင္ကယ္ႀကီးနဲ႔ေပါက္ခ်လာတယ္ဘာေတြလုပ္ေနၾကျပန္ၿပီလဲဆိုၿပီး လာရႈိးတာပါပဲအဲဒီေန႔မွာပဲ ဦးပီတာနဲ႔ ရင္းႏွီးသြားျပန္ပါတယ္ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္က်ေတာ့ ဦးပီတာဖုန္းဆက္လာၿပီး ငါလည္းစီးရီးေၾကာ္ျငာ႐ိုက္မလို႔တဲ့ ကန္ေတာ္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံတဲ့ က်ေနာ္လည္းအဲ့ဒီေတာ့မွ ကန္ေတာ္ႀကီးဆိုတာေရာက္ဖူးတာပဲ အိုက္တင္ ဘယ္လိုသင္လဲဆိုေတာ့ မင္းလုပ္တတ္သလို လုပ္ကြာတဲ့
အဲလိုနဲ႔ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု႐ိုက္ျဖစ္ၾကတယ္ ေနာက္တစ္ပတ္က်ေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ေခြတဲ့အဲဒီအခါက်ေတာ့မွ Smile နဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ကိုတႏိုင္ငံလုံးသတိထားမိခဲ့ၾကတာပါ ကို Alex ဆိုတဲ့သီခ်င္းနဲ႔က်ေနာ္လည္း အတြဲေခြေၾကာ္ျငာမွန္သမွ်႐ိုက္ရေတာ့တာပဲအဲဒီကေန VCD ဆိုတာႀကီးေပၚလာေတာ့ VCD မင္းသားအလုပ္ရသြားတာေပါ့ တစ္ပုဒ္ ၄၀၀၀ တစ္ရက္ ၂ ပုဒ္႐ိုက္ရင္ ၈၀၀၀ ယူၿပီးျပန္ လြမ္းတတ္ရင္ေတာ့ လြမ္းခ်င္စရာ
က်ေနာ့္ဘဝျဖစ္စဥ္မွာ ကိုနီကိုရဲ ဒီဇိုင္းဆရာေက်ာင္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံဦးပီတာတို႔ကို ဒီစာနဲ႔ ဂါရဝျပဳပါတယ္အံ့ဩစရာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္အမွတ္တရဓာတ္ပုံတစ္ပုံမွကိုမရွိတာပဲ ဒါနဲ႔ ငယ္ငယ္က က်ေနာ္တို႔သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ပုံပဲ ဒီစာမွာအမွတ္တရထည့္သြင္းပါတယ္ ဒီပုံေတာင္ Smile ေပးထားလို႔က်ေနာ့္မွာရွိေနတာ ” ဆိုၿပီးအမွတ္တရေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ေအာက္ေျခမလြတ္ပဲ အခုခ်ိန္ထိ လက္ဦးဆရာေတြနဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာဘဝအစကို အမွတ္ရေနတဲ့ စိုင္းစိုင္းကေတာ့ တကယ့္ကို ခ်ီးက်ဴးစရာပါပဲေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္။
ဦးနှောက်သွေးယိုစိမ့်မှုကြောင့် ဆေးရုံတင်လိုက်ရပြန်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးမန်းဝင်း 🙁
ဦးမန်းဝင်းဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ငယ်စဉ်ကတည်းက နှစ်ခြိုက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူချစ် ဟာသလူရွှင်တော်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အငြိမ့်စင်မြင့်တွေပေါ်မှာ ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ဦးအဖြစ်နဲ့ကော ၊ ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယိုတွေထဲမှာ ဟာသ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်နဲ့ပါ ရယ်စရာဟာသပြက်လုံးလေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဘဝအမောကို ဖြေဖျောက်ပေးခဲ့သူဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ဇရာကြောင့် အသက်အရွယ်လေးတစ်ခုကြာတာနဲ့အညီ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာတာကြောင့် ဦးမန်းဝင်းဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားခဲ့ရတာ အချိန်ကြာမြင့်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကလည်း ဦးမန်းဝင်းဟာ ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်သွားတာကြောင့် အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ကုသခဲ့ရပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ဆေးကုသမှုခံယူပြီး ကျန်းမာရေးပြန်လည်သက်သာလာပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထပ်မံပြီးတော့ ဦးနှောက်သွေးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် မေဒါဝီဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်ပို့ဆောင်လိုက်ရကြောင်းသိရပါတယ်။
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ကြီး ဦးမန်းဝင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့် အခုလို ဆေးရုံတင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဟေမာမန်းဝင်းကလည်း “ဖေကြီးခံစားနေရတဲ့ရောဂါတွေကို မကြည့်ရက်ပါဘူး အဖေရယ်… ဖေကြီးအမြန်ဆုံး သက်သာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ဦး” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဟာသလူရွှင်တော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဧရာ ၊ ကျော်ထူး နဲ့ ဆင်မ အပါအဝင် အခြားသရုပ်ဆောင်တချို့ကလည်း စိတ်ပူစွာနဲ့ စိုးရိမ်တကြီး ကျန်းမာရေးသတင်းလာရောက်မေးမြန်းထားကြပါသေးတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေလည်း ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးမန်းဝင်းကျန်းမာရေးအမြန်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာစေဖို့ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးေႏွာက္ေသြးယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတင္လိုက္ရျပန္တဲ့ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီး ဦးမန္းဝင္း 🙁
ဦးမန္းဝင္းဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ငယ္စဥ္ကတည္းက ႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူခ်စ္ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
အၿငိမ့္စင္ျမင့္ေတြေပၚမွာ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္တစ္ဦးအျဖစ္နဲ႔ေကာ ၊ ႐ုပ္႐ွင္ ဗြီဒီယိုေတြထဲမွာ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္နဲ႔ပါ ရယ္စရာဟာသျပက္လုံးေလးေတြနဲ႔ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ဘဝအေမာကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးခဲ့သူဆိုလည္းမမွားပါဘူး။
ဇရာေၾကာင့္ အသက္အ႐ြယ္ေလးတစ္ခုၾကာတာနဲ႔အညီ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာတာေၾကာင့္ ဦးမန္းဝင္းဟာ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ရပ္နားထားခဲ့ရတာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းေလာက္ကလည္း ဦးမန္းဝင္းဟာ ႐ုတ္တရက္ႏွလုံးရပ္သြားတာေၾကာင့္ အေရးေပၚေဆး႐ုံတင္ကုသခဲ့ရပါေသးတယ္။
အဲ့ဒီေနာက္ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး က်န္းမာေရးျပန္လည္သက္သာလာေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ထပ္မံၿပီးေတာ့ ဦးေႏွာက္ေသြးယိုစိမ့္မႈျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ေမဒါဝီေဆး႐ုံသို႔ အေရးေပၚပို႔ေဆာင္လိုက္ရေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာ႐ွင္ႀကီး ဦးမန္းဝင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းတာေၾကာင့္ အခုလို ေဆး႐ုံတင္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကို သူ႕ရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဟမာမန္းဝင္းကလည္း “ေဖႀကီးခံစားေနရတဲ့ေရာဂါေတြကို မၾကည့္ရက္ပါဘူး အေဖရယ္… ေဖႀကီးအျမန္ဆုံး သက္သာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ဦး” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္မွာ ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စြာနဲ႔ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အဲ့ဒီ post ရဲ႕ေအာက္မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဧရာ ၊ ေက်ာ္ထူး နဲ႔ ဆင္မ အပါအဝင္ အျခားသ႐ုပ္ေဆာင္တခ်ိဳ႕ကလည္း စိတ္ပူစြာနဲ႔ စိုးရိမ္တႀကီး က်န္းမာေရးသတင္းလာေရာက္ေမးျမန္းထားၾကပါေသးတယ္။
ပရိတ္သတ္ေတြလည္း ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီး ဦးမန္းဝင္းက်န္းမာေရးအျမန္ဆုံးျပန္လည္သက္သာလာေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စနောက်တဲ့ ပရိသတ်ကို မတရားဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
May 7, 2020 by Shwengwe Games
ပရိသတ်တိုင်း ချစ်စနိုးနဲ့ အမြဲစနောက်နေကျဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က အရာရာတိုင်းကို အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ ပျော်ပျော်သာနေထိုင်တတ်တာကြောင့် အောင်မြင်မှုကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကို ချစ်စနိုးနဲ့ စနောက်ကြသလို စိုင်းစိုင်းကလည်း သူ့ပရိသတ်တွေကို ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ပြန်လည်ကျီစယ်တတ်တာကြောင့် အားလုံးသဘောကျနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က သူနဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းလေးတစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။ ထိုပုံအောက်မှာ စိုင်းစိုင်းကို စနောက်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေက “အသက်ကြီးတော့ကွာခြားသွားတယ်။ သင်ဇာလေးက ကိတ်ပြီး ဝဖြိုးလာတယ်။ ဘစိုင်းက အိုဇာပြီး ရင့်ထော်လာတယ်။” ဆိုပြီး ကျီစယ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကောမန့်ကို မြင်မြင်ချင်းပဲ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က “သူ့ကျတော့ သင်ဇာလေးတဲ့။ မင်းတို့ကောင်တွေ မတရားပါဘူးကွာ။” လို့ ပြန်ပြောခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေခမျာ ပွဲကျခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းကတော့ သူ့ကိုစနောက်တဲ့ ပရိသတ်တိုင်းကို ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ပြန်လည်စနောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်လည်း စိုင်းစိုင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးယောင်ယောင်ဖြစ်နေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး စေနာက္တဲ့ ပရိသတ္ကို မတရားဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္
ပရိသတ္တိုင္း ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ အၿမဲစေနာက္ေနက်ျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္က အရာရာတိုင္းကို အေကာင္းျမင္တဲ့စိတ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္သာေနထိုင္တတ္တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ၾကာ႐ွည္စြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ကို ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ စေနာက္ၾကသလို စိုင္းစိုင္းကလည္း သူ႕ပရိသတ္ေတြကို ႐ုပ္တည္ႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္က်ီစယ္တတ္တာေၾကာင့္ အားလုံးသေဘာက်ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာလည္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္က သူနဲ႔ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ ပုံရိပ္ေဟာင္းေလးတစ္ခုကို ျပန္လည္မွ်ေဝထားပါတယ္။ ထိုပုံေအာက္မွာ စိုင္းစိုင္းကို စေနာက္ခ်င္တဲ့ ပရိသတ္ေတြက “အသက္ႀကီးေတာ့ကြာျခားသြားတယ္။ သင္ဇာေလးက ကိတ္ၿပီး ဝၿဖိဳးလာတယ္။ ဘစိုင္းက အိုဇာၿပီး ရင့္ေထာ္လာတယ္။” ဆိုၿပီး က်ီစယ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုေကာမန္႔ကို ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္က “သူ႕က်ေတာ့ သင္ဇာေလးတဲ့။ မင္းတို႔ေကာင္ေတြ မတရားပါဘူးကြာ။” လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြခမ်ာ ပြဲက်ခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စိုင္းစိုင္းကေတာ့ သူ႕ကိုစေနာက္တဲ့ ပရိသတ္တိုင္းကို ႐ုပ္တည္ႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္စေနာက္တတ္တဲ့အက်င့္႐ွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္လည္း စိုင္းစိုင္းရဲ႕အျဖစ္ကိုၾကည့္ၿပီး ျပဳံးေယာင္ေယာင္ျဖစ္ေနမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။
အငယ်ဆုံးတွေဆိုတာ ဒီလို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးတွေရှိတယ်
အငယ်ဆုံးတွေဆိုတာမိသားစုထဲမှာ ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးလို့ရတက်တဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ စိတ်ရင်း ကောင်းထားတက်ကြသလိုအချစ်ရေးမှာလည်း သူ့ချစ်သူအပေါ်အချစ်သန်ပြီး မမူးပဲရစ်တက်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူလေးတွေလေ။
သူတို့ကိုချစ်ရင်အချစ်ကြီးလွန်းလို့ အစစအရာရာအမြဲတမ်းဂရုစိုက်မူတွေအပြည့်ခံရတက်ကြတယ့်သူလေးတွေပါ မဟုတ်မခံဆိုပေမဲ့အရာရာကိုမတွေး တောပဲ
တဇွတ်ထိုး နိုင်တက်ကြတယ် သူငယ် ချင်းတွေထဲမှာတော့ တခုခု ဖြစ်လာရင် လက်မြန်ခြေမြန်တက်ကြသူတွေပါ။
မိသားစုအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာတော့ အရမ်းကိုကောင်းတတ်ကြတယ် ။
အိမ်မှာဘာအလုပ်မှမလုပ်ချင်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကူညီဖို့အမြဲတမ််းအစဉ်သင့်ဖြစ်နေသလို ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရမညီးညူပဲ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ် ထားလေးရှိတယ်။
ထပ်ပြောပါမယ် အငယ်ဆုံးလေးတွေဆိုတာ ဆိုးချင်နွဲ့ချင်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာယုတ်မာတဲ့စိတ်ထား လုံးဝမရှိပါဖူးဗျာဟုတ်တယ်ဆိုရင် အငယ်ဆုံးလေးတွေ ရှယ်သွားလိုက်ကြတော့နော်။
အငယ္ဆုံးေတြဆိုတာ ဒီလို ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေလးေတြရွိတယ္
အငယ္ဆုံးေတြဆိုတာမိသားစုထဲမွာ ဆိုးခ်င္တိုင္းဆိုးလို႔ရတက္တဲ့အက်င့္ဆိုးေလးေတြေတာ့ရွိတယ္ဒါမဲ့ စိတ္ရင္း ေကာင္းထားတက္ၾကသလိုအခ်စ္ေရးမွာလည္း သူ႕ခ်စ္သူအေပၚအခ်စ္သန္ၿပီး မမူးပဲရစ္တက္တဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သူေလးေတြေလ။
သူတို႔ကိုခ်စ္ရင္အခ်စ္ႀကီးလြန္းလို႔ အစစအရာရာအၿမဲတမ္းဂ႐ုစိုက္မူေတြအျပည့္ခံရတက္ၾကတယ့္သူေလးေတြပါ မဟုတ္မခံဆိုေပမဲ့အရာရာကိုမေတြး ေတာပဲ
တဇြတ္ထိုး နိုင္တက္ၾကတယ္ သူငယ္ ခ်င္းေတြထဲမွာေတာ့ တခုခု ျဖစ္လာရင္ လက္ျမန္ေျချမန္တက္ၾကသူေတြပါ။
မိသားစုအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုး သူငယ္ခ်င္းေတြအေပၚမွာေတာ့ အရမ္းကိုေကာင္းတတ္ၾကတယ္ ။
အိမ္မွာဘာအလုပ္မွမလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ကူညီဖို႔အၿမဲတမ္္းအစဥ္သင့္ျဖစ္ေနသလို ဘာပဲလုပ္ေပးရလုပ္ေပးရမညီးၫူပဲ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ ထားေလးရွိတယ္။
ထပ္ေျပာပါမယ္ အငယ္ဆုံးေလးေတြဆိုတာ ဆိုးခ်င္ႏြဲ႕ခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ သူတစ္ပါးအေပၚမွာယုတ္မာတဲ့စိတ္ထား လုံးဝမရွိပါဖူးဗ်ာဟုတ္တယ္ဆိုရင္ အငယ္ဆုံးေလးေတြ ရွယ္သြားလိုက္ၾကေတာ့ေနာ္။
မျက်မှန်ကို ဒီနေ့မှ စတပ်တဲ့သူဟာသူ့နှာခေါင်းပေါ်မှာ မျက်မှန်ရှိနေတာကို အချိန်ပြည့်သတိထားမိနေတယ်။
နေရတာ မလွတ်လပ်ဘူး။ ခဏခဏ မျက်မှန်ကို ချွတ်ကြည့်တယ်။တပ်ကြည့်တယ်။မျက်မှန်ကိုမကြာမကြာ အဝတ်နဲ့သုတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် မျက်မှန်တပ်တာ ကြာသွားတဲ့အခါ မျက်မှန်တပ်ထားမှန်း မသိတော့ဘူး။မျက်မှန်ဟာကိုယ့်မျက်နှာရဲ့အစိတ်အ ပိုင်းတစ်ခုလို ဖြစ်သွားပြီ။မျက်မှန်တပ်ထားတယ် ဆိုတာကို မေ့ထားလို့ရသွားပြီ။
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူစေတနာကောင်းတဲ့သူဟာ သူ့ကိုယ့်သူ “ငါ စိတ်ကောင်းရှိတယ် ငါစေတနာကောင်းတယ်”လို့ မတွေးတော့ဘူး။
အဲဒီလို တွေးနေသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ကောင်းတကယ်မရှိသေးဘူး။စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ လုပ်ယူနေရတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။
စိတ်ကောင်းရှိတာဟာသူ့ပင်ကိုယ်သဘာဝမဖြစ်သေးဘူး။ တ ကယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဖြစ်သွားတဲ့အခါသူစိတ်ကောင်းရှိတာကို သူမေ့ထားလိုက်ပြီ။ မတွေးတော့ဘူး။
အဲဒီအခါမှာမှသူဟာတကယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူ ဖြစ်သွားပြီ။ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သူဟာခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။”ငါ ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်”လို့မတွေးဘူး။
“ငါ ခွင့်လွှတ်တယ် ငါခွင့်လွှတ်တယ်”လို့ ခဏခဏ တွေးနေရင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါက်သလဲ။
ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်။ခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်လို့တောင် မတွေးတော့တဲ့ အချိန်မှာတကယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီ။
ရောင့်ရဲတဲ့သူဟာရောင့်ရဲတယ်။ ဒါပေမယ့် “ငါက ရတာနဲ့ရောင့်ရဲတယ်”လို့ မတွေးဘူး။ကိုယ်ရောင့်ရဲကြောင်းကို သူများကို မပြောတော့ဘူး။
ငါကရောင့်ရဲတယ်လို့မကြာခဏပြောနေရင်တကယ်ရောင့်ရဲတာ မဟုတ်သေးဘူး။ရောင့်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုလိုချင်နေသေးတယ် ကိုယ့်ကို ရောင့်ရဲတဲ့သူလို့ အများမြင်အောင် သိအောင် လုပ်နေတယ်။
အဲဒီလိုဂုဏ်ကိုလိုချင်နေသေးတာကိုက မရောင့်ရဲသေးလို့ပဲ။အဲဒီလိုပဲဥပုသ်စောင့်တယ်။တရားအားထုတ်တယ်။ အဲဒါကို လူတွေသိအောင်ပြောနေတယ်ဆိုရင်မလုပ်ခင်ကတည်းကလူသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒ ရှိနေတယ်။
အဲဒီလိုဆန္ဒရှိနေရင်စေတနာမမှန်သေးဘူး။အတ္တစိတ်က လွှမ်းမိုးထားတုန်းပဲ။အတ္တစိတ်ကလုပ်နေတယ်။ ငါကသူများထက် ပိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနစိတ်ကလွှမ်းမိုးနေသေးတယ်။
အတ္တစိတ်,မာနစိတ်တို့ မရှိတော့ရင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ လုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီအကြောင်းကိုမပြောတော့ဘူး။မေးရင်တောင် လိုတာထက်ပိုမပြောဘူး။တိုတိုနဲ့လိုရင်းပဲ ပြောမယ်။
စားနိုင်တာဂုဏ်တစ်ခုမဟုတ်သလိုမစားဘဲနေနိုင်တာလည်း ဂုဏ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။တချို့က စားနိုင်တာကိုကြွားတယ်။တချို့ ကမစားဘဲနေနိုင်တာကိုကြွားတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဟာ မလွတ်လပ်တဲ့သူတွေပဲ။
အပျော်အပါးတွေကို များများခံစားတဲ့သူက သူခံစားနိုင်တာကို ကြွားတယ်။အပျော်အပါးတွေကို မခံစားတဲ့သူကသူမခံစားတတ်တဲ့အကြောင်းကိုကြွားတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးရဲ့စိတ်ဟာသဘာဝချင်းတူတူပဲ။ကြွားတာဟာ မလွတ်လပ်တာပဲ။ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ လူသိစေချင် တဲ့စိတ် အားကြီးနေရင် လွတ်လပ် တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။
တကယ်ကောင်းတဲ့သူဟာ “ငါ ကောင်းတယ်” လို့တောင် မတွေးတော့ဘူး။တရားဟာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ထပ်တူဖြစ်နေရင် လုပ်နေပေမယ့်လုပ်နေတယ်လို့ မတွေး တော့ဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝ ဖြစ်သွားပြီ။ အသက်ရှူနေသလို ဖြစ်သွားပြီ။နှလုံးခုန် နေသလို ဖြစ်သွားပြီ။ တမင်တကာ လုပ်ယူနေရရင် သိနေတယ်။ပင်ကိုယ်ဖြစ်သွားရင် မသိတော့ဘူး။ လုပ်နေရတယ်လို့ မထင်တော့ဘူး။
စာနည်းနည်းတတ်တဲ့သူဟာသူ့ကိုလူတွေက စာတော်တော်,တတ်တယ်လို့ ထင်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့် အကိုးအကားတွေများများနဲ့ ပြောချင်တယ်။ ရေးချင်တယ်။
စာပေကို တကယ်ချစ်လို့ လေ့လာတဲ့သူဟာ နှစ်တွေကြာလေလေ သူသိတာဟာနည်းနည်း လေးမသိတာက အများကြီးဆိုတာကို သိလာလို့သူတတ်ကြောင်းကို မပြချင်တော့ဘူး။
သူ့ကိုလူတွေအထင်မကြီးမှာကိုမကြောက်တော့ဘူး။ သူဟာ အထင်ကြီးတာအထင်သေးတာနှစ်မျိုးလုံးကို လွန်မြောက်သွားပြီ။သူဟာသူစာတတ်တာကို မေ့ထားလို့ရသွားပြီ။ ဒါကြောင့် စကားပြောတဲ့အခါ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အကိုးအကားတွေကို မထည့်တော့ဘူး။
ရိုးရိုးပဲပြောတယ်။မေးလာမှဖြေတယ်။မမေးဘဲ မဖြေဘူး။ သူ့စိတ်ကိုစာကလွှမ်းမိုးမှု မရှိတော့ဘူး။ငွေများများ မရဖူးတဲ့သူဟာ ပထမအကြိမ်ငွေများများရလိုက်ရင်အဲဒီငွေထုပ်ကို ဘယ်နေရာမှာထားရမှန်း မသိတော့ဘူး။
မကြာခဏအဲဒီငွေထုပ်ကို ကိုင်ကြည့်နေ တတ်တယ်။ အဲဒီငွေထုပ်ကိုစိတ်မချလို့ အိပ်တာတောင် စိတ်မဖြောင့်နိုင်ဘူးတစ်ရေးနိုးတောင်သတိရနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငွေကိုများများရှာနိုင်လာတဲ့အခါငွေကို မေ့ထားလိုက်တော့တယ်။
ငွေရဖို့အဓိကမထားတော့ဘဲ ကိုယ်တန်ဖိုး ထားတာကို လုပ်ဖြစ်ဖို့ အဓိကထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ငွေနဲ့ကြွားတဲ့သူ အိမ်နဲ့ကြွားတဲ့သူ ကားနဲ့ကြွားတဲ့သူ ပစ္စည်းနဲ့ကြွားတဲ့သူစိန်တွေ ရွှေတွေနဲ့ကြွားတဲ့သူဟာ တကယ်လူချမ်းသာ မဟုတ်သေးဘူး။
တကယ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာ သူချမ်း သာတာကို မေ့ထားလို့ရသွားပြီ။ပြည့်စုံနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဟာသူပိုင်ဆိုင်တာတွေကို မေ့ထားလိုက်ပြီ။ထမင်းဝနေတဲ့သူဟာ ထမင်းစားဖို့အကြောင်းကို မတွေးတော့ဘူး။
ထမင်းစားပြီးပေမယ့်ထမင်းအကြောင်းကိုပဲ တွေးနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယူဆမလဲ။သူ့စိတ်က ဆာနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ငွေဘယ်လောက်ရှိရှိ ငွေအကြောင်းကိုပဲတွေးနေရင်သူ့စိတ်ထဲ ကမွဲနေသေးလို့။သူဟာမလွတ်လပ်သေးဘူး။ငွေရဲ့ကျွန် ဖြစ်နေသေးတယ်။
တကယ်ရာထူးကြီးကြီးနဲ့တန်တဲ့သူဟာ ရာထူးအကြောင်းကို မတွေးတော့ဘူး။သူနဲ့ မတန်တဲ့ရာထူးကို ရထားတဲ့သူဟာ
ဘယ်သူနဲ့တွေ့တွေ့ သူ့ရာထူးကို တလေးတစားအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပြီးသူ့ကိုစကားပြောနေမှသူကျေနပ်တယ်။ သူ့ရာထူးကိုမခေါ်ဘဲ သူ့နာမည်ကို ခေါ်တဲ့သူကိုသူ,ရန်ငြိုးထားတော့မယ်။
သူ့စိတ်ကသူ့ရာထူးထက် မြင့်သွားတဲ့အခါမှာ တော့ သူ, ရာထူးကိုမေ့သွားပြီ။တာဝန်ကျေအောင်တော့ လုပ်မယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီရာထူးကိုအဓိက မထားတော့ဘူး။
အဲဒီလိုလူမှရာထူးနဲ့တန်တဲ့သူ ဖြစ်သွားပြီ။ သူ့အလုပ်ကိုသူ လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်နိုင်ပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုလူက သိပ်ရှားပါတယ်။ရာထူးကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ သိကြောင်း ရင်းနှီးကြောင်း ပြောနေတဲ့သူဟာရာထူးကို သိပ်အထင်ကြီးနေတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
သူ့ကိုယ်ကိုသူနည်းနည်းအထင်သေးတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ ဆက်ဆံရေး မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်အဆင့်အတန်းဆိုတာကိုမေ့ထားလို့ ရတဲ့သူ, သူ့အဆင့်အတန်းဆိုတာကိုလည်းမေ့ထားလို့ရတဲ့သူမှသာ လွတ် လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဆက်ဆံနိုင်မယ်။
မရှိတာကိုလည်း မေ့ထားနိုင်မှ ရှိတာကိုလည်း မေ့ထားနိုင်မှလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်သင့်တာကို ဆက်လုပ်နိုင်မယ်။
လွတ်လပ်တဲ့သူဟာ သူလုပ်နိုင်တာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိအောင် မကြွားဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့သူ ရှားလိုက်တာ…နော်။
“ဆွမ်းကပ်ရာမှာ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ”
April 15, 2020 April 15, 2020 by Shwengwe Games
မြို့ရွာထဲကိုဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြွတဲ့အ ခါတိုင်း “သံဃာတွေကို ကပ်ထားတဲ့စားပွဲကို သွားမကိုင်နဲ့-မထိနဲ့ ”လို့ ဒကာ- ဒကာမတွေက တခြားသူတွေကို တား မြစ်တဲ့စကားကိုအမြဲလိုလိုကြားရပါတယ်။
သံဃာတော်တွေကိုဆက်ကပ်ထားတဲ့စားပွဲကိုထိမိရင်အကပ်ခံပျက်သွားတယ်လို့ထင်လို့ပြောနေတဲ့စကားပါ။သံဃာ တော်တွေကို ဆွမ်းကပ်တဲ့အခါမှာ ဆွမ်း၊ဆွမ်းဟင်းပုဂံ၊စားပွဲနဲ့ အခြားအကပ်ခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒကာ၊ဒကာမတွေကမထိရဘူး၊သွားထိလို့ရှိရင်ကပ်ထားတာပျက်လို့သံဃာတော်တွေကမဘုဉ်း ပေးမသုံးဆောင်ကောင်းဘူးလို့ အထင်ရှိနေကြပါတယ်။
တချို့ဆိုရင်ဆွမ်းဟင်းလိုက်ရင်တောင်အကပ်ခံပျက်သွားတယ်ထင်ပြီးထပ် ခါထပ်ခါကပ်တာတောင်ကြုံဖူးပါတယ်။တကယ်တော့ဒကာ၊ဒကာမတွေကသံဃာတော်တွေကိုဆက်ကပ်ထားတဲ့ပစ္စည်း၀တ္ထုအစုစုဟာတစ်ယောက် ယောက်ကထိရုံ၊ကိုင်တွယ်ရုံနဲ့ ကပ်ထားတဲ့အာနိသင်ပျက်မသွားပါဘူး။သံဃာ တော်တွေကိုပစ္စည်း၀တ္ထုအစုစုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာ “အကပ်ခံမြောက်တဲ့အင်္ဂါနဲ့အကပ်ခံပျက်တဲ့အင်္ဂါတွေအသီးသီးရှိကြပါတယ်”အကပ်ခံမြောက်တဲ့အင်္ဂါက (၅)ပါးရှိပြီး၊အကပ်ခံပျက်တဲ့အင်္ဂါက (၆)ပါးရှိပါတယ်။
ရဟန်းတော်များဟာမိမိပိုင် ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ၊သူတစ်ပါးပိုင်ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ လူ,သာမဏေ,တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးဦးက ဆက် ကပ်မှသာဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်ကောင်းပါတယ်။အကပ်မခံဘဲနဲ့ကိုယ် ပိုင်ပစ္စည်းကောတပါးသူပိုင်ပစ္စည်းပါမသုံးဆောင်ကောင်းပါဘူး။ရေနဲ့ဒန်ပူအခုခေတ်အခေါ် သွားတိုက်တံ(၂)ခုသာချွင်းချက်အနေနဲ့အကပ်မခံဘဲသုံးဆောင်မှီဝဲကောင်းပါတယ်။
(၁) ကပ်မည့်ကပ္ပိယကာရက ဒကာ၊ဒကာမသည်သံဃာတော်ကိုကပ်လှုမည့်ပစ္စည်း၀တ္ထုကိုဦးစွာရှေးရှုယူဆောင်၍လာရပါမယ်။ပြီးလျှင်ကပ်လှုမည့်ပစ္စည်းကို လက်ဖြင့်ရှေ့တိုးပေးကာဆက်ကပ်လှုဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးခေါင်းစသည်ဖြင့်ရွက်ထားသောလှူဖွယ်ကိုလှူဒါန်းလိုကဦးခေါင်းအနည်းငယ်စောင်းပေး၍ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းရပါမယ်။
(၂) အလှူခံသံဃာတော်နှင့်လှူဒါန်းဆက်ကပ်သည့်ဒကာ၊ဒကာမဟာအကွာအဝေးအားဖြင့်နှစ်တောင်တစ်ထွာဟတ္တဘသ် (၄၅-လက်မ)အတွင်းရှိရပါမယ်။
(၃) သာမာန် အင်အားရှိသူတစ်ယောက် မြှောက်ချီမ,နိုင်သောဝတ္ထုပစ္စည်း ဖြစ်ရပါမယ်။စားပွဲခုံအကြီးကြီးများဖြင့် ဆက်ကပ်ရာမှာအလွန်လေးလံ၍မကြွနိုင်လျှင်ဟင်းခွက်များကိုတစ်ခွက်ချင်းဆက်ကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခွက်ချင်းအကပ်ခံပြီးသောအခါမိသားစုအားလုံး(သို့)အဖွဲ့ဖြင့်ကပ်လိုပါကစားပွဲခုံကြီးကို ညီညာစွာမ,ပြီးထပ်မံကပ်နိုင်သည်။စားပွဲလိုက်ဆက်ကပ်ရာမှာစားပွဲကြွနိုင်လျှင်ကား စားပွဲလိုက်မကပ်နိုင်ပါတယ်။
(၄) ဆက်ကပ်သူဒကာ-ဒကာမနှင့် အ ကပ်ခံသူသံဃာတော်သည်နှစ်တောင့်တစ်ထွာဟတ္တဘသ်အကွာအဝေးအတွင်းတည်းရှိပြီးကြားတွင်နံရံ၊တံတိုင်းစသည်ခြားနေ၍ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကပ်လှူရန်လုံး၀မဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ပစ်မြှောက် ၍ဆက်ကပ်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်ထို့သို့သောကပ်လှူနည်းမျိုးသည် လုံး၀မဖြစ်သာသည့်အခါမှသာကပ်လှူခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း၊လက်- စသည်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ကိုယ်နှင့်ထိစပ်နေသော ကိုင်ထားသည့် ခွက်၊ တုတ်၊ ခုံ – စသည်ဖြင့် ခံ၍ထိ၍ဖြစ်စေထို(၂)မျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်အကပ်ခံသောရဟန်းကခံယူလို့ရပါတယ်။နှစ်တောင်တစ်ထွာအတွင်တစုံတရာလာကပ်ခဲ့သော်အကပ်ခံသည့်သံ ဃာတော်အနေနဲ့လက်ထဲမှာတောင်ဝှေး၊ဒုတ်စသည်နဲ့တဆင့်ထိတို့၍အကပ်ခံလို့ရပါတယ်။
အထက်ပါအင်္ဂါ(၅)ချက်ကတော့ဆွမ်းစသည်၀တ္ထုပစ္စည်းလှူဒါန်းဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံရတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံမှာသာ ဆက်ကပ်တဲ့ပစ္စည်းဟာအကပ်ခံမြောက်ပြီးသံဃာတော်များအနေနဲ့ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
သံဃာတော်များအနေနဲ့ အပင်ပေါက်နိုင်သောအစေ့၊အမြစ်၊အဆစ်ပါသော သစ် သီး၊သစ်မြစ်များကိုမဘုဉ်းပေးမသုံး ဆောင်အပ်ပါဘူး။ကပ္ပိယကာရကဒကာ၊ဒကာမတို့အနေနဲ့ သံဃာတော်တို့နဲ့အပ်စပ်အောင်ကပ္ပိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစေ့ဗိဇဓါတ်မသေတဲ့ အစေ့၊အမြစ်၊အဆစ်ကိုဓါးနဲ့ဖြစ်စေ၊လက် သည်းနဲ့ဖြစ်စေ၊မီးနဲ့ဖြစ်စေ ထိုးဆိတ်ပေးပြီး မှကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ထိုးဆိတ်ပြီး မကပ္ပိရသေးဘူးဆိုရင်သံဃာတော်တို့က ကပ္ပိယဒကာ၊ဒကာမတို့ကို “ကပ္ပိယံကရောဟိ”(ရဟန်းတော်တို့အား အပ်စပ်အောင် ပြုလော့)ဟုဆိုပြီးနောက်ကပ္ပိယတို့က “ကပ္ပိယံ ဘန္တေ”(အရှင်ဘုရားတို့အား အပ်စပ်သည်ကိုပြုပါ၏)ဟုဆိုလျှက် ပါးစပ်ကဆိုတုန်းဖြစ်စေ၊ဆိုပြီးချက်ချင်းဖြစ်စေမီးဖြင့်သော်လည်းထိုး၊ဓားဖြင့်သော်လည်းခုတ်၊လက်သည်းဖြင့်သော်လည်းဆိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓားရာ၊လက်သည်းရာ၊ အပေါက်ရာ-အဖြစ် ထင်ရှားဖြစ်လျှင်အပ်စပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အကပ်ခံပျက်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့“စွန့်,ချ,ပေး,လု, မစ္စု,လိင်ပြန်,ဤခြောက်တန်၊ ကပ်ခံပျက်ကြောင်းတည်း” ဆိုတဲ့လင်္ကာအတိုင်း အင်္ဂါ(၆)ပါးရှိပါတယ်။
(၁) စွန့်- ဆိုတာက အကပ်ခံထားတဲ့ ဆွမ်းစသော လှူဒါန်းဖွယ်ရာအဖြာဖြာတို့ကို သံဃာတော်ကမသုံးဆောင် မဘုဉ်းပေးတော့လို့ အာလယပြတ်စွန့်လိုက်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ထိုသို့စွန့်လိုက်ပြီဆိုရင် သံဃာတော်တို့အနေနဲ့ သုံးဆောင်ရန်မအပ်စပ်တော့ပါဘူး။
(၂) ချ- ဆိုသည်မှာ ရဟန်းဘ၀မှသိက္ခာ ချလိုက်ပြီး လူ၀တ်လဲလိုက်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ အကပ်ခံထားသောရဟန်ဟာ သိက္ခာချ- လူထွက်သွားပြီးဆိုရင် ထိုသံဃာအကပ်ခံထားသော ဆွမ်းစသည့်လှူဖွယ်ရာဟာအလိုအလျောက်အကပ်ခံပျက်သွားပါပြီး။ကျန်သံဃာတော်တို့အနေနဲ့ဘုဉ်းပေဒသုံးဆောင်လိုလျှင် ထပ်မံအကပ်ခံပြီးမှသာအပ်စပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ပေး- အကပ်ခံထားသည့် လှူဖွယ်၀တ္ထုကို တစ်စံတစ်ယောက်ကို ပေးလိုက်လျှင်းလည်းအကပ်ခံပျက်ပါတယ်။ ထိုသို့ပေးရာမှ နှုတ်မှပေးလျှင်ပေးချင်းအကပ်ခံမပျက်သေးပါဘူး။ လက်ကလွှတ်လိုက်သည့်အခါမှသာအကပ်ခံပျက်တာဖြစ်ပါတယ်။
(၄)လု- သံဃာတော်တို့အားကပ်လှူဒါန်းထားသည့်လှူဖွယ်ပစ္စည်းကို လူစသည့်တစ်စုံတစ် ယောက်ကလုယူသွားလျှင်လည်း အကပ်ခံပျက်၍ထိုပစ္စည်းကိုသံဃာတော်တို့အနေနဲ့ မသုံးဆောင်အပ်တော့ပါဘူး။
(၄) မစ္စု- အကပ်ခံထားသည့် သံဃာတော်ပြန်လွန်တော်မူလျှင်လည်းဘုဉ်းပေးဖို့ မအပ်စပ်တော့ပါဘူး၊ကပ်ထားတဲ့အာနိ သင်ပျက်ကွယ်သွာပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၅) လိင်ပြန်- အကပ်ခံထားသည့် သံဃာသည် ယောင်္ကျားလိင်အဖြစ်မှ မိန်မလိင်အဖြစ်သို့လိင်ပြောင်း၊လိင်ပြန်သွားလျှင်လည်းထိုလိင်ပြောင်သူအကပ်ခံထားသည့် လှူဖွယ်ဘောဇဉ်ကို မသုံးဆောင်မဘုဉ်းပေးကောင်းတော့ပါဘူး။
ရေ-ဒန်ပူမှ လွဲ၍ အခြား သူတပါးပိုင် မိမိပိုင် မည့်သည့်သုံးဆောင်ဖွယ်မဆိုအကပ်မခံဘဲဘုဉ်းပေးလျှင်ဖြစ်စေ၊ အကပ်ခံပျက်သည့် ဘောဇဉ်ကို ဘုဉ်း ပေးသည်ဖြစ်စေ ဘုဉ်းပေးသည့်ရဟန်းမှာ “ဒန္တပေါဏ သိက္ခာပုဒ်”အရ ပါစိတ်အာပတ်သင့်ပါတယ်။
သံဃာတော်များကို ဆွမ်းဆက်ကပ်ရာတွင်အချို့ဒကာ၊ဒကာမတို့ဟာစေတနာလွန်ကဲပြီးသံဃာတော်များက“ပြည့်စုံပြီ၊တော်ပါပြီ”လို့တားတဲ့ကြားကဆွမ်း၊ဆွမ်းဟင်းတို့ကိုသဒ္ဒါပိုကာဒီတဇွန်လေးတော့ထည့်ပါဦးဘုရားဆိုပြီးထည့်ထပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်သံဃာတော်များအနေနဲ့“ပြည့်စုံပြီး၊တော်ပြီ၊တန်ပြီ”လို့ပြောပြီးသားဘောဇဉ်ကိုမဘုဉ်းပေးကောင်းးတော့ပါဘူး ဘုဉ်းပေးရင်အာပတ်သင့်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်ဆွမ်းဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာ ဒကာ၊ဒကာမတို့အနေနဲ့ သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သတိထားစရာအချက်ကတော့ “ဂိလာန သံဃာဆိုရင် မွန်းလွဲချိန်နောက်ပိုင်းမှာဆေးအမှတ်နဲ့ ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်ကို ဆက်ကပ်ကောင်းဘုဉ်းပေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဆေးအမှတ်နဲ့သဘောထားဘုဉ်းပေးလိုက်ဆိုပြီး နေလွဲကာလနဲ့မအပ်စပ်သည့်ခဲဖွယ်တို့ကိုဆက်ကပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဝိကာလဘောဇနသိက္ခာပုဒ်အရ ဂိလာနပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးအာပတ်က ကင်း လွတ်ခွင့်ပေးမထားပါဘူး။
သီလဝံသဖြစ်တော်မူသော ရှေးဆရာတော်မထေရ်ကြီးများမှာ ဆေးသောက်ရန်အတွက်ပင်နေ့လွဲညစာမသုံးဆောင်ဘဲ ရောဂါဒဏ်ကိုမငဲ့ကွက်ဘဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရန် ကျင့်ဆောင်တော်မူခဲ့သည့် ထုံးများကိုသတိချပ်သင့်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များအနေနဲ့ တနေ့မဟုတ်တနေ့မှာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ကို ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်းကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွမ်းကပ်ရာမှာအကပ်ခံအာနိသင်ပျက်သွားလျှင်လည်းကပ်လှူသည့်၊ဒကာ၊ဒကာမတို့မှာအပြစ်မဖြစ်ပါဘူး၊ ကု သိုလ်ကတော့ရမြဲရပါတယ်။
ဒီလိုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာနည်းစနစ်ကျစွာဆက်ကပ်လှူကြမှသာ သံဃာတော်အရှင်သူများအပြစ်အာပတ်လွတ်ကင်းပြီးမျှတချမ်းသာစွားဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်၍ဓူရနှစ်ဖြာကိုမပင်မပန်းဆောင် ရွက်နိုင်မှာဖြစ်သလိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကျိုးတရားကြီ းမား၍လောကီ၊လောကုတ္တရာအကျိုးထူးတရားများနဲ့ ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။(ကိုယ့်အကျိုး၊သူအကျိုး၊မျှတစွာ သည်ပိုးနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေ)ဓမ္မဝီရ အရှင်တေဇနိ
ကပ်ဆိုးဘေးဆိုးတွေ ပယ်ဖျောက်စေဖို့စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားခဲ့တဲ့ဂါထာတော်ကြီး
တစ်ခါတော့ ရောဂါဘေးကြီးတွေ ကျရောက်လာလို့လူတွေတအားသေကြတယ်။ပရိတ်ရွတ်တာတောင်တော်တော်နဲ့ မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါ့ကြောင့် စံကင်း ဆရာတော်ကအဋ္ဌာနမေတံပါဠိကိုပါထည့်ပြီးသံဃာတော်များကိုရွတ်စေတယ်”
“အဋ္ဌာနမေတံပါဠိတော်ကြီးကိုရွတ်မှပဲ သေခါနီးလူနာတွေဟာရောဂါတွေပျောက်ကင်းပြီးအသက်ချမ်းသာရာ ပြန်ရသွားကြတယ်။ကပ်ရောဂါဘေးကြီးလည်းပျောက်ကင်းသွားတယ်။
ဆရာတော်ကြီးဟာအဋ္ဌာနမေတံ ပါဠိတော်နဲ့အတူတစ်ခြားဂါထာသုံးဂါထာကို လူလာတိုင်းနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းလေ့ရှိတယ်။
“ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့ သာသနာပြုနိုင်တာဟာ ဒီပါဠိတော်လေးပုဒ်ကြောင့်ပဲလို့ယုံကြည် တယ်။ဒ့ါကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့ စံကင်းရွာမှာ လေးထောင့်ကျောက်တိုင်ကြီး တစ်တိုင်စိုက်ပြီးဒီပါဠိတော်လေးပုဒ်ကို ရေး ထားတယ်။နေ့တိုင်းမရွတ်ဖြစ်တောင် ကျောက်တိုင်ရှိရာရောက်လာလို့တစ်နေ့တစ်ခါရွတ်လည်းအကျိုးမနည်းဘူး ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီကျောက်တိုင်ကြီးကို စိုက်ခဲ့တာပါ”
(မြန်မာ)။ ။ ရဟန်းတို့ သူတစ်ပါးတို့၏ လုံ့လပယောဂဖြင့် ဘုရားရှင်တို့အား ဇီဝိတိန္ဒြေမှချခြင်းမည်သည် မဖြစ်နိုင် (လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ ရခြင်းဟူသည် မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလို) “ရဟန်းတို့ဘုရားရှင်တို့သည် သက်တမ်းအစဉ် အတိုင်းနေ၍ မိမိအလိုလိုသာလျှင်ပရိနိဗ္ဗာန် ဝင်စံကြကုန်၏။ဤမှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့် ငါ့အား အမြဲတမ်း ကျန်းမာခြင်း ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်ပါစေ” တဲ့။
(မြန်မာ)။ ။ “နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာလျှင် တင့်တယ်၏။ လမင်းသည် ညအခါ၌သာလျှင် တင့်တယ်၏။ ပြည့်ရှင်မင်းသည်မင်းမြောက် တန်ဆာဆင်ယင်သောအခါ၌သာလျှင် တင့် တယ်၏။ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဈာန်သမာပတ်ဝင်စားသော အခါ၌သာလျှင် တင့်တယ်သပ္ပါယ်၏။ဘုရားရှင်သည် သီလ သမာဓိ ပညာ ပုညဓမ္မဟူသော တရားငါးမျိုးတို့ဖြင့်နေ့ရောညပါအမြဲတန်းတင့်တယ်၏။ထိုသို့တန်ခိုးတော် အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ် စွာဘုရားကိုရိုသေစွာရှိခိုးပါ၏။ဤသို့ ရှိခိုးရသောတန်ခိုးတဇော်အာနုဘော်ကြောင့် အကြံစည်မှန်သမျှအလုံးစုံပြည့်ဝရပါလို၏” တဲ့
(မြန်မာ)။ ။ အာဇာနည်ယောကျ်ားဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာ ဘုရားအားရှိခိုးပါ၏။မြင့်မြတ်သောယောက်ျားဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးပါ၏။ သတ္တဝါတို့ကို သံသရာမှကူးမြောက်ကယ်တင်တတ်သောမြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးပါ၏။မသေရာနိဗ္ဗာန်ကိုပေးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပါ ၏-တဲ့။
(မြန်မာ)။ ။ ပွင့်တော်မူပြီးသမျှသော ဘုရားရှင်အားလုံးတို့အားလည်းကောင်း ပွင့်တော်မူလတ္တံ့သောဘုရားရှင်အားလုံး တို့အားလည်းကောင်းပွင့်တော်မူဆဲ ဘု ရားရှင်အားလုံးတို့အားလည်းကောင်း တပည့်တော်သည်အခါခပ်သိမ်းရှိခိုးပါ၏ တဲ့”